Bit By Bit - Mifehy - 6.5 roa etika rafitra
Adihevitra momba ny fikarohana ny ankamaroan'ny fitsipika mampihena ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny consequentialism sy ny deontology.
Ireo efatra ireo fitsipika etika ny fanajana ny olona, Beneficence, Fahamarinana, sy ny fanajana ny lalàna sy ny Public Interest no tena tena homarinana avy amin'ny roa hafa saro-takarina etika rafitra: consequentialism sy ny deontology. Ny fanatratrarana ireo fotodrafitrasa ireo dia mahasoa satria hahafahanao mamantatra izany ary avy eo dia mieritreritra ny iray amin'ireo fahasamihafana lehibe indrindra amin'ny etika fikarohana: amin'ny fampiasana fitaovana mety mety tsy ilaina amin'ny fanatanterahana ny etika.
Ny fanenjehana, izay misy fototra i Jeremy Bentham sy John Stuart Mill, dia mifantoka amin'ny fitondrana asa izay mitondra any amin'ny firenena tsara kokoa manerantany (Sinnott-Armstrong 2014) . Ny fitsipiky ny tombom-barotra, izay mifantoka amin'ny fandanjana ny risika sy ny tombony, dia miorim-paka lalina amin'ny fisainana manaraka. Amin'ny lafiny iray, ny deontology, izay niandoha tamin'ny asan'ny Immanuel Kant, dia mifantoka amin'ny adidy etika, tsy miankina amin'ny vokatr'izany (Alexander and Moore 2015) . Ny fitsipiky ny fanajàna ny olona, ​​izay mifantoka amin'ny fahaleovan-tenan'ireo mpandray anjara, dia miorim-paka lalina amin'ny fomba fisainana. Fomba haingana sy manahirana hanavaka ireo sehatra roa ireo dia ny fifantohana ireo mpitsabo dia mifantoka amin'ny fitaovam- piasana sy ny tanjon'ireo mpanohitra .
Raha te hahita ny fomba fiasan'ireny rafitra anankiroa ireny, dia eritrereto tsara ny fanekena. Ireo fepetra roa ireo dia azo ampiasaina hanohanana ny faneken'izy ireo, fa noho ny antony samihafa. Ny soso-kevitra momba ny fitenenana momba ny fanekena voamarina dia manampy amin'ny fisorohana ny fanararaotana amin'ny mpandray anjara amin'ny fandraràna ny fikarohana izay tsy dia mandanjalanja loatra ny loza mety hitranga sy ny tombontsoa azo raisina. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny hevitra miseho momba ny toe-tsaina dia manohana ny faneken'izy ireo, satria manampy amin'ny fisorohana ny vokatra ratsy ho an'ny mpandray anjara. Na dia izany aza, ny valim-panontaniana iray momba ny fanekena an-tsoratra dia mifantoka amin'ny adidin'ny mpikaroka hanaja ny fahaleovantenan'ireo mpandray anjara. Raha nomena ireo fomba ireo, dia mety ho vonona ny handà ny fepetra takiana amin'ny faneken'izy ireo amin'ny toe-javatra izay tsy misy loza akory ny mpisolovava iray madio, raha toa ka tsy afaka manao izany ny mpandala ny madio.
Ny vokany sy ny deôtôlôgika dia samy manome fomba fijery manan-danja, saingy ny tsirairay dia azo alaina amin'ny fisiana tsy misy dikany. Ho an'ny vokany, ny iray amin'ireo tranga ireo dia mety ho antsoina hoe Transplant . Alao sary an-tsaina ny dokotera iray manana marary dimy maty noho ny tsy fahombiazan'ny taova sy ny marary salama izay afaka mamonjy ny dimy rehetra ny taova. Ao anatin'ny fepetra sasany, dia omena dokotera mpanohitra ny mpitsabo iray-ary omena mihitsy aza-hamono ilay marary salama mba hahazoana ny taova. Izany fifantohana tanteraka amin'ny finiavana, tsy misy ifandraisany amin'ny fitaovana, dia diso.
Tahaka izany ihany koa, ny fitsaboana dia azo atao ihany koa ho an'ny adihevitra tsy dia mampihetsi-po, toy ny tranga izay mety ho antsoina hoe Bomb Time . Alao sary an-tsaina ny manamboninahitra iray polisy izay naka ny mpampihorohoro izay mahafantatra ny toerana misy baomba mandatsa-dranomaso izay hamono olona an-tapitrisany. Ny polisy misahana ny deôtolojika dia tsy mandainga mba handrodanana mpampihorohoro hanambara ny toerana misy ny baomba. Mifantoka tanteraka amin'ny sehatra, raha tsy misy ny finiavana, dia diso koa.
Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny mpikaroka ara-tsosialy dia manaiky ny mason'ireo rafitra roa ireo. Ny fanamarihana an'io fanovozan-tena io dia manampy amin'ny fanazavana ny antony mahatonga ny adihevitra ara-tsosialy maro-izay tsy dia mandroso loatra eo amin'ireo izay manana tanjona lavitra kokoa sy ireo izay tsy dia misy loatra. Ireo mpandala ny nentim-paharazana dia amin'ny ankapobeny dia manolotra fanoherana momba ny fisarahana - fanoherana izay tsy mandresy lahatra ireo mpitsabo, izay miahiahy momba ny fomba. Tahaka izany koa, ireo mpitsabo dia manolotra fanaporofoan-kevitra momba ny fitaovana, izay tsy mandresy lahatra ireo mpanolotsaina, izay mifantoka amin'ny finiavana. Ny fanamarihana eo amin'ny tale mpanaraka sy ny mpitsabo dia toy ny sambo roa mandalo amin'ny alina.
Ny vahaolana iray amin'ireny adihevitra ireny dia ho an'ny mpikaroka ara-tsosialy mba hampivelatra ny fitoviana sy ny tsy fitoviana eo amin'ny fitoviana sy ny fitondran-tena. Mampalahelo fa tsy hitranga izany; Ny filozofa dia niady mafy tamin'ireo olana ireo nandritra ny fotoana maharitra. Na izany aza, ireo mpikaroka dia afaka mampiasa ireto rafitra etika roa ireto-ary ireo fitsipika efatra izay tiany - mba handresen-dahatra ireo fanamby ara-poko, hanatsarana ny fifanakalozana, ary hanolotra fanatsarana ny fikarohana.